eNasha.com - घर त्यहाँ, जहाँ मन !
घर त्यहाँ, जहाँ मन !
संसारका सबैभन्दा जीवित अग्ला व्यक्ति चीनको भित्री मंगोलियाका बाओ जिसुनलाई जिन्दगीमा एक पटक बिहे गरेर मर्ने रहर थियो । ५६ वर्षको उमेर भइसक्दा पनि बिहे गर्न उनको उचाईले रोकिरहेको थियो । अन्ततः उनले दुलही फेला पारेका छन् र उनले आफूभन्दा लगभग आधा उमेर र आधा आकारकी जहान फेला पारेका छन् ।
चिनियाँ अखबार पिपुल्स डेलीका अनुसार ५६ वषीय बाओ २.३६ मिटर (७ फिट ९ इन्च) अग्ला छन् र त्यही कारणले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डले उनलाई सन् २००५ जनवरी १५ मा नाम दर्ता गराएको थियो । उनकी दुलही चाहिँ २९ वर्षी र मात्र १.६८ मिटर (५ फिट ६ इन्च) की छिन् । उनी एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा काम गर्छिन् ।
उनलाई मर्नुअघि हित्तचित्त मिलेकी दुलही बिहे गर्ने खूब रहर थियो । उनको बिहेका लागि संसारभर केटी नखोजिएको पनि होइन तर अन्तिममा आएर जिया शुजुआनसँग बिहे हुन पुग्यो । शुजुआन पनि चीनकै भित्री मंगोलिया निवासी नै भएको बेइजिङ न्यूजले जनाएको छ ।
१५ वर्षको उमेरसम्म एउटा साधारण युवाजस्तै हुर्किएका उनी त्यसपछि भने हृवात्तै बढेका थिए । उनको अग्लाईको कारण भने अझैसम्म डाक्टरहरुले पत्तो पाउन सकेका छैनन्, गिनिज बुकले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ । सेनामा बास्केट बलका खेलाडी बाओले आफ्नो जागीरपछि भित्री मंगोलियाको पोल्ट्री फार्ममा काम गर्ने गरेका थिए ।
गएको डिसेम्बरमा उनले प्लास्टिक चपाएका दुइ डल्फिनको मुखबाट डेढ मिटर लामो हातले प्लास्टिकका टुक्रा झिकेर तिनको ज्यान जोगाएको खबर अखबारले छापेका थिए ।
सन् १९५१ मा भित्री मंगोलियामा जन्मिएका पाँच दाजुभाइदिदीबहिनीमध्ये काइँला उनको यो बिहेपछि उनका परिवारले खुशी मनाएका थिए । उनकी नवदुलहीले बिहेपछि भनिन्- "मन ठूलो कुरो हो, साइज होइन !"
श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो माया सुन्दरी गुगल सेलेब्रिटी नग्नता विज्ञापन भव्यता बलिउड फट्याइँ इन्टरनेट मूर्ख्याइँ उदारता प्रविधि हलिउड कीर्तिमान मुद्दा मामिला परिस्थिति सेक्स
sex dating divorce cheating kissing marriage honeymoon friends tips gifts breakup infidelity parties know women attracting girls know men attracting guys flirting love personal valentine's day ex-love occassion